ယောင်းရဲ့အချိန်တွေကို မှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့ အသုံးချနေရဲ့လား? -
ယောင်းရဲ့အချိန်တွေကို မှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့ အသုံးချနေရဲ့လား?
Posted on December 17, 2018 January 9, 2019 Author Wynee Myanmar	Comment(0)
အရင်ဆုံး မေးကြည့်ပါ…ကိုယ့်ရဲ့ အချိန်တွေကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချနေတာ သေချာရဲ့လား?
“လူတိုင်းက တစ်နေ့မှာ ၂၄နာရီ ပိုင်ဆိုင်ကြပါတယ်။” ဒီစာကြောင်းကို လေးလေးနက်နက် တွေးကြည့်ပါ။ အချိန်ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရဘက်ကကြည့်ရင် ယောင်းဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အချမ်းသာဆုံး လူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းက တစ်နေ့တာအတွက် တူညီတဲ့ အချိန်တွေ ရရှိထားကြပါတယ်။ ယောင်းမှာရှိနေတဲ့ အချိန်တွေကို ဘယ်လိုအသုံးချလဲဆိုတဲ့အပေါ် မူတည်ပြီး ယောင်းကိုယ်တိုင်က ဘယ်လိုလူမျိုး ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကို ပုံဖော်နိုင်ပါတယ်။
“အချိန်ဆိုတာ ငွေပါ” လို့ ဆိုကြတယ်။ တကယ်တော့ အချိန်ဟာ ငွေထက်ပို တန်ဖိုးကြီးပြီး ပြန်လည်အစားထိုးလို့ရတဲ့အရာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အက်ဒ်မင်တို့တွေက အာရုံပျက်လွယ်တာမို့ ကိုယ်ပိုင်ထားတဲ့ အချိန်တွေကို Facebookမှာတွေ၊ အကျိုးမရှိတဲ့ ဖျော်ဖြေမှုတွေ၊ မလိုလားအပ်တဲ့ လူမှုရေး လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ဒါမှမဟုတ် အချိန်ဖြုန်းခြင်းတွေအပေါ်မှာ သုံးနေတာ အတော်များပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ကိုယ်လုပ်လက်စအရာတွေကို ခဏလောက်ရပ်ပြီး “ငါ့ရဲ့အချိန်တွေကို မှန်ကန်စွာ အသုံးချနေရဲ့လား” ဆိုတဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့မေးခွန်းကို မေးဖို့မေ့နေတတ်ကြတာလည်း ပါတာပေါ့…
အကျိုးရလဒ်ကောင်းတွေ ရလာနိုင်မယ့် အလုပ်တွေကို အာရုံထား လုပ်ဆောင်ခြင်းက အာရုံရှုပ်ထွေးစေတဲ့အလုပ်တွေ ဒါမှမဟုတ် အကျိုးမရှိတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို တားဆီးနိုင်ဖို့ အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအဆင့် ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ရလဒ်ကို အာရုံထားလိုက်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးကို လုပ်ဆောင်ရင်း အဆင့် တစ်ဆင့်ကနေ တစ်ဆင့်ကို ကူးပြောင်းတဲ့အခါ၊ လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခုကနေ တစ်ခုကို ကူးပြောင်းတဲ့အခါမှာ ရှုပ်ထွေးသွားမယ့်အစား အစီအစဉ်တကျ စဉ်ဆက်မပြတ်တွေးခေါ်ခြင်း အလေ့အထတွေကို ပိုပြီး ရနိုင်စေပါတယ်။
ကိုယ်လုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုရဲ့ နောက်ဆုံး ရလဒ်ဆိုတာ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု၊ engagement နဲ့ အလုပ်ရဲ့အရည်အသွေးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို မေ့ထားလို့မရဘူးနော်.. ဒီတော့ တစ်ရက်တာရဲ့ အဆုံးမှာ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်တွေရဲ့ အဆုံးသတ်ရလဒ်ဟာ ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာ တစ်ခုကို အမြဲထားရှိ စစ်ဆေးခြင်းက ယောင်းရဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို ပိုပြီး နီးကပ်လာစေနိုင်ပါတယ်။
Related Article >>> ကြိုးစားတဲ့ လူတိုင်းအတွက် အမြဲတမ်း နေရာတစ်နေရာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ မဝေဝေကျော်
နေ့စဉ် အလုပ်တာဝန်တွေနဲ့ပဲ ရှုပ်ထွေးနေလို့လည်း မဖြစ်သေးပါဘူး။ ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့လည်း လိုပါသေးတယ်။ ဒီအတွက် အချိန်ကို စီမံခန့်ခွဲတတ်ဖို့က မရှိမဖြစ်ပေါ့…
အနာဂတ်အတွက် အနားယူဖို့၊ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ဖို့၊ မှန်ကန်သင့်တော်တဲ့မေးခွန်းတွေမေးဖို့၊ ကိုယ့်ရဲ့ အရည်အချင်းတွေကို မြှင့်တင်ဖို့၊ အဖိုးတန်တဲ့ စာအုပ်တွေ ဖတ်ဖို့၊ network ချဲ့ထွင်ဖို့၊ အခြားသူတွေကို ပံ့ပိုးကူညီဖို့၊ အခြားသူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းနေဖို့၊ ပြေလည်ဖို့၊ စဉ်းစားတွေးတောဖို့၊ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ ကိုယ့် အစီအစဉ်တွေ ဖြစ်မြောက်လာဖို့ ကြိုတင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ အချိန်တွေ ထားပါ။
ဒီလို လုပ်ခြင်းက အက်ဒ်မင်တို့ ယောင်းတို့ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုတွေကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်တာအပြင် ဗဟုသုတနဲ့ တွေးခေါ်စဉ်းစားမှု အမြော်အမြင်ရှိမှုတို့ကို လေ့လာဆည်းပူးရနိုင်စေပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ ရလဒ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒီလို လုပ်ခြင်းက ကိုယ့်တိုးတက်မှုအတွက် ခိုင်မာတဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်နေခြင်းပါပဲ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြောင်းလဲဖို့အတွက် ကိုယ့်စည်းကိုယ့်ကမ်းနဲ့ နေတတ်အောင် ပြောင်းလဲပါ။
လူတွေက လွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းတွေ၊ ဖြတ်လမ်းတွေဆို အရမ်းကို သဘောကျတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်စိတ်အားထက်သန်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို ရောက်ဖို့အတွက် စွမ်းဆောင်ရည်က ယောင်းကိုယ်တိုင် ကြိုးစားခြင်းပါပဲ။ ဒါမှသာ ကြိုးစားမှုနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ အောင်မြင်မှု အရသာကို ခံစားရမှာ မဟုတ်လား..
ဆိုကြပါစို့… တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တိုးတက်အောင် ဘယ်လို ပြောင်းလဲမလဲလို့ မေးခဲ့ရင် ဒီမေးခွန်းရဲ့ အဖြေက ကိုယ့်စည်းကမ်းလေး ကိုယ်ထားပြီး ကြိုးစားခြင်းကသာ သိသာထင်ရှားပြီး အကျိုးရှိတဲ့ ပြောင်းလဲမှုကို ယူလာပေးနိုင်တာပါနော်.. ကောင်းသောဦးတည်ခြင်းနဲ့ ပြောင်းလဲလာဖို့အတွက် ဖြတ်လမ်းနည်းဆိုတာ မရှိပါဘူး ယောင်းတို့ရေ… ကိုယ်တိုင် ကြိုးစားနိုင်မှသာ ရမှာပါနော်…
အရငျဆုံး မေးကွညျ့ပါ…ကိုယျ့ရဲ့ အခြိနျတှကေို အကြိုးရှိရှိ အသုံးခနြတော သခြောရဲ့လား?
“လူတိုငျးက တဈနမှေ့ာ ၂၄နာရီ ပိုငျဆိုငျကွပါတယျ။” ဒီစာကွောငျးကို လေးလေးနကျနကျ တှေးကွညျ့ပါ။ အခြိနျဆိုတဲ့ ဝေါဟာရဘကျကကွညျ့ရငျ ယောငျးဟာ ကမ်ဘာပျေါမှာ အခမျြးသာဆုံး လူတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ လူတိုငျးက တဈနတေ့ာအတှကျ တူညီတဲ့ အခြိနျတှေ ရရှိထားကွပါတယျ။ ယောငျးမှာရှိနတေဲ့ အခြိနျတှကေို ဘယျလိုအသုံးခလြဲဆိုတဲ့အပျေါ မူတညျပွီး ယောငျးကိုယျတိုငျက ဘယျလိုလူမြိုး ဖွဈလာမလဲဆိုတာကို ပုံဖျောနိုငျပါတယျ။
“အခြိနျဆိုတာ ငှပေါ” လို့ ဆိုကွတယျ။ တကယျတော့ အခြိနျဟာ ငှထေကျပို တနျဖိုးကွီးပွီး ပွနျလညျအစားထိုးလို့ရတဲ့အရာလညျး မဟုတျပါဘူး။ အကျဒျမငျတို့တှကေ အာရုံပကျြလှယျတာမို့ ကိုယျပိုငျထားတဲ့ အခြိနျတှကေို Facebookမှာတှေ၊ အကြိုးမရှိတဲ့ ဖြျောဖွမှေုတှေ၊ မလိုလားအပျတဲ့ လူမှုရေး လုပျဆောငျခကျြတှေ ဒါမှမဟုတျ အခြိနျဖွုနျးခွငျးတှအေပျေါမှာ သုံးနတော အတျောမြားပါတယျ။ တဈခါတဈလမှော ကိုယျလုပျလကျစအရာတှကေို ခဏလောကျရပျပွီး “ငါ့ရဲ့အခြိနျတှကေို မှနျကနျစှာ အသုံးခနြရေဲ့လား” ဆိုတဲ့ ရိုးရှငျးတဲ့မေးခှနျးကို မေးဖို့မနေ့တေတျကွတာလညျး ပါတာပေါ့…
အကြိုးရလဒျကောငျးတှေ ရလာနိုငျမယျ့ အလုပျတှကေို အာရုံထား လုပျဆောငျခွငျးက အာရုံရှုပျထှေးစတေဲ့အလုပျတှေ ဒါမှမဟုတျ အကြိုးမရှိတဲ့ လုပျဆောငျခကျြတှကေို တားဆီးနိုငျဖို့ အထောကျအကူပွုနိုငျပါတယျ။ နောကျဆုံးအဆငျ့ ထှကျပျေါလာတဲ့ ရလဒျကို အာရုံထားလိုကျမယျဆိုရငျ ကိုယျဒီလုပျငနျးစဉျကွီးကို လုပျဆောငျရငျး အဆငျ့ တဈဆငျ့ကနေ တဈဆငျ့ကို ကူးပွောငျးတဲ့အခါ၊ လုပျငနျးစဉျ တဈခုကနေ တဈခုကို ကူးပွောငျးတဲ့အခါမှာ ရှုပျထှေးသှားမယျ့အစား အစီအစဉျတကြ စဉျဆကျမပွတျတှေးချေါခွငျး အလအေ့ထတှကေို ပိုပွီး ရနိုငျစပေါတယျ။
ကိုယျလုပျဆောငျလိုကျတဲ့ လုပျငနျးစဉျတဈခုရဲ့ နောကျဆုံး ရလဒျဆိုတာ ကွညျလငျပွတျသားမှု၊ engagement နဲ့ အလုပျရဲ့အရညျအသှေးတို့ပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါကို မထေ့ားလို့မရဘူးနျော.. ဒီတော့ တဈရကျတာရဲ့ အဆုံးမှာ ကိုယျလုပျခဲ့တဲ့ အလုပျတှရေဲ့ အဆုံးသတျရလဒျဟာ ဘာဖွဈမလဲဆိုတာ တဈခုကို အမွဲထားရှိ စဈဆေးခွငျးက ယောငျးရဲ့ ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျကို ပိုပွီး နီးကပျလာစနေိုငျပါတယျ။
Related Article >>> ကွိုးစားတဲ့ လူတိုငျးအတှကျ အမွဲတမျး နရောတဈနရောရှိပါတယျဆိုတဲ့ မဝဝေကြေျော
နစေ့ဉျ အလုပျတာဝနျတှနေဲ့ပဲ ရှုပျထှေးနလေို့လညျး မဖွဈသေးပါဘူး။ ကိုယျ့အတှကျကိုယျ ရငျးနှီးမွှုပျနှံဖို့လညျး လိုပါသေးတယျ။ ဒီအတှကျ အခြိနျကို စီမံခနျ့ခှဲတတျဖို့က မရှိမဖွဈပေါ့…
အနာဂတျအတှကျ အနားယူဖို့၊ ကနျြးမာရေးဂရုစိုကျဖို့၊ မှနျကနျသငျ့တျောတဲ့မေးခှနျးတှမေေးဖို့၊ ကိုယျ့ရဲ့ အရညျအခငျြးတှကေို မွှငျ့တငျဖို့၊ အဖိုးတနျတဲ့ စာအုပျတှေ ဖတျဖို့၊ network ခြဲ့ထှငျဖို့၊ အခွားသူတှကေို ပံ့ပိုးကူညီဖို့၊ အခွားသူတှနေဲ့ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေး ကောငျးနဖေို့၊ ပွလေညျဖို့၊ စဉျးစားတှေးတောဖို့၊ စီစဉျဆောငျရှကျဖို့နဲ့ ကိုယျ့ အစီအစဉျတှေ ဖွဈမွောကျလာဖို့ ကွိုတငျဆောငျရှကျနိုငျဖို့ အခြိနျတှေ ထားပါ။
ဒီလို လုပျခွငျးက အကျဒျမငျတို့ ယောငျးတို့ရဲ့ စိတျဝငျစားမှုတှကေို ရှာဖှတှေရှေိ့နိုငျတာအပွငျ ဗဟုသုတနဲ့ တှေးချေါစဉျးစားမှု အမွျောအမွငျရှိမှုတို့ကို လလေ့ာဆညျးပူးရနိုငျစပွေီး ကောငျးမှနျတဲ့ ရလဒျကို ဖွဈပျေါစပေါတယျ။ ဒီလို လုပျခွငျးက ကိုယျ့တိုးတကျမှုအတှကျ ခိုငျမာတဲ့ အခွခေံအုတျမွဈတဈခုကို တညျဆောကျနခွေငျးပါပဲ။
ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ပွောငျးလဲဖို့အတှကျ ကိုယျ့စညျးကိုယျ့ကမျးနဲ့ နတေတျအောငျ ပွောငျးလဲပါ။
လူတှကေ လှယျကူတဲ့ နညျးလမျးတှေ၊ ဖွတျလမျးတှဆေို အရမျးကို သဘောကတြတျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကိုယျစိတျအားထကျသနျတဲ့ ပနျးတိုငျကို ရောကျဖို့အတှကျ စှမျးဆောငျရညျက ယောငျးကိုယျတိုငျ ကွိုးစားခွငျးပါပဲ။ ဒါမှသာ ကွိုးစားမှုနဲ့ ထိုကျတနျတဲ့ အောငျမွငျမှု အရသာကို ခံစားရမှာ မဟုတျလား..
ဆိုကွပါစို့… တဈယောကျယောကျက ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ တိုးတကျအောငျ ဘယျလို ပွောငျးလဲမလဲလို့ မေးခဲ့ရငျ ဒီမေးခှနျးရဲ့ အဖွကေ ကိုယျ့စညျးကမျးလေး ကိုယျထားပွီး ကွိုးစားခွငျးကသာ သိသာထငျရှားပွီး အကြိုးရှိတဲ့ ပွောငျးလဲမှုကို ယူလာပေးနိုငျတာပါနျော.. ကောငျးသောဦးတညျခွငျးနဲ့ ပွောငျးလဲလာဖို့အတှကျ ဖွတျလမျးနညျးဆိုတာ မရှိပါဘူး ယောငျးတို့ရေ… ကိုယျတိုငျ ကွိုးစားနိုငျမှသာ ရမှာပါနျော…
“Everyone has 24 hours inaday!” Think about the statement deeply. In terms of time, you are as rich as the richest person in the world. Everyone has equal time foraday – how you use this resource will shape the person that you become.
Tagged Career, spend, Time, use, Wynee
Posted on June 29, 2017 July 7, 2019 Author Wai Zin
ကိုယ်က အခြေနေအမျိုးမျိုးကြောင့် ကိုယ့်စီနီယာထက် အသက်ကြီးနေတယ် ဆိုပါစို့ ။ဘယ်လို ခံယူချက်မျိုးထားမလဲ?
Posted on April 25, 2019 April 25, 2019 Author Yin Sandi Ko
အခုတည်ထောင် အခုအောင်မြင်ရအောင် မအေးအေးဝင်းစီစဉ်တာမှ မဟုတ်တာလေ…
Native Speaker လိုပြောနိုင်ဖို့ collocations တွေ လေ့လာကြမယ်
ပြန်ဆုံဖြစ်ခဲ့ရင်… (အပိုင်း – ၃)